Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha ka dhashay Weerarkii Kismaayo – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wararkii ugu dambeeyay Khasaaraha ka dhashay Weerarkii Kismaayo
Ciidamada amniga Jubbaland, ayaa soo afjaray weerarkii ay Kooxda Al-shabaab ku qadeen Hotel Cas-caseey oo ku yaalla Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Weerarka oo socday in ka badan 15 saacadood,ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray Mas’uuliyiin iyo dad shacab ah oo ku sugnaa Hotelka ay Al-shabaab weerarka ku qadeen.
Dadka ku dhintay qaraxyada iyo Weerarka lagu qaaday Hotel Cas-caseey,waxaa ka mid ah Wariye Maxamed Sahal Cumar Gacma-dheere oo ahaa Wakiil Wareedkii Warbaahinta SBC ee Magaalada Kismaayo,waxaa sidoo kale dadka weerarkasi ku dhintay ka mid ahaa Hodan Naaleeye oo aheyd Gabar Saxafiyad ah oo sameyn jirtay Barnaamijyo hormarka looga hadlay,iyadoona dhawaan ka timid Dalka Canada.
Waxaana sidoo kale dadka weerarka ku dhintay ka mid ahaa Musharax Madaxweyne Jubbaland Maxamed Ismaciil Shuuriye,Nin Ajnabi ah oo u dhashay Dalka Shiinaha,iyo dad kale oo shacab ah oo hotelka ku sugnaa.
Kooxda Al-shabaab ayaa sheegatay Mas’uuliyada Weerarka waxa ayna sheegteen iney ku dileen Mas’uuliyiin katirsan Dowladda iyo Saraakiil Ciidan sida ay ku baahiyeen baraha ay Internet-ka ka isticmalaan Ururka Al-shabaab.
Previous articleKismaayo:Kooxo hubeysan oo weerartey hotel
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo ka tacsi dadkii ku naf waayey weerarka argagixisanimo ee Kismaayo